I-Xiaomi iya kuphehlelela iifowuni ezimbini zokugqibela eziphezulu ngokuhambisa ikhamera | I-Androidsis
I-Xiaomi iya kuphehlelela isiphelo sesibini esiphakamileyo kunye nokuhamba kweekhamera
Isilayidi, ukurhoxisa okanye ukuvela kweekhamera ziintloko kakhulu kwi-Android. Kwezi nyanga sikwazile ukubona ukuba zingaphi iimveliso ezishiye i-smartphone yolu hlobo. Kutshanje siye sabona iimodeli ezinje I-OPPO Reno okanye I-Vivo S1, phakathi kwezinye ezininzi. Ukongeza, uninzi lweempawu zisebenza nakwiifowuni zolu hlobo, njengoko kunjalo ngoku ngeXiaomi.
Okwangoku, uphawu lwaseTshayina iphuhlisa iifowuni ezimbini zokugqibela. Iimodeli ezimbini ezizimeleyo ekusebenziseni le khamera isliding. Ngelixa zingabonakali njengeRedmi oko kuvuza kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ke yonke into ibonisa ukuba bazokwaziswa phantsi kwegama leXiaomi kule meko.
Ukuza kuthi ga ngoku zimbalwa iinkcukacha malunga neefowuni ezimbini ezintsha zeXiaomi. Yintoni eyaziwayo kukuba iifowuni ezimbini Ngaba i-Snapdragon 855 njengeprosesa. Kuyacaca ke ukuba ezi zimbini zingaphezulu koluhlu. Kodwa ngaphandle koku, akukho zinkcukacha zobuchwephesha malunga nazo sele zivuziwe okwangoku.
Njengamagama ekhowudi kubo, Uphawu lwaseTshayina lusebenzise uRaphael noDavinci kule meko. Inkqubo yekhamera kwizixhobo ezibini kulindeleke ukuba ibe ngoomatshini. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi abazukunyanzeliswa ukuba basebenze ngesandla, njengoko kusenzeka ngokomzekelo kwi-Mi MIX 3.
Ngale ngqiqo, yonke into ibonisa ukuba ezi fowuni zimbini ziya kuqaliswa phantsi kwegama leXiaomi. Nangona kunokwenzeka ukuba enye ibe yePocophone, ekufuneka iphehlelele isizukulwana sayo sesibini kulo nyaka. Ukusukela kutshanje kwaqinisekiswa isiphelo esiphezulu seRedmi ayizukuba nekhamera esliding.
Azikho ezinye iinkcukacha malunga nezi zixhobo esele zityhilwe ukuza kuthi ga ngoku. UXiaomi ngokwakhe khange athethe nto ngabo.. Sinokuba nolwazi oluninzi malunga nesi siphelo sitsha sophawu kungekudala. Ngokuqinisekileyo sinethemba lokuba nazo, kuba kuyacaca ukuba izilayida zithandwa kakhulu namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Xiaomi iya kuphehlelela isiphelo sesibini esiphakamileyo kunye nokuhamba kweekhamera
IHuawei P30 Pro ivavanya olona vavanyo ludumileyo
Ungazikhuphela kanjani ngaphandle izingxoxo zeTelegram kunye neWhatsApp